Snowflake Inotsanangura Mashandisiro Avakashandura Kutengesa Kwavo neAccount-Yakavakirwa Kushambadzira #CONEX | Martech Zone
Ini ndiri kumusoro muToronto ndichipinda Uberflip's Yemukati Chiitiko musangano. Nhasi, tinopedza zuva iri pamuzinda weUberflip wakanaka uye toteerera kune vamwe vakurukuri vakanaka. Chimwe chikamu chakange chakakanganisa pandiri chaive Snowflake's Mutungamiriri weABM, Daniel G. Zuva, achitaura nemaitiro aakagadzira chirongwa cheABM icho chakakwidziridzwa nemhedzisiro yekutengesa kweSnowflake.
@uberfliphq kufashukira chikamu che #CONEX irikusvetuka! Akanaka HQ ​​pano mu #Toronto #torontotech
Nzvimbo yakagoverwa Douglas Karr (@dknewmedia) on Aug 20, 2018 pa 2: 26pm PDT
Pakazara, Snowflake yakave nekukura gumi. Danieri akave nechokwadi chekuwedzera kuti izvi zvaisave zvese mhedzisiro yeakaunzi-yakashambadzirwa kushambadzira, asi yakave nemhedzisiro. Daniel akacherechedzawo kuti mutsauko uripo pakati pechinyakare-chikoro chakanangana nekutengesa kune ABM zvese zvave mukati mavo kugona kuyera nezvishoma zviwanikwa uye kushandisa zvinobudirira kwehunyanzvi. Iyo kambani yakura kubva mukutarisa pane zvakamira, kushandisa mafirografiki kunongedza mamwe marudzi emabhizinesi, kune izvozvi ichipa panguva yakakodzera uye inoenderana-ne-imwe yezvinoitika zviitiko kukwezva maakaunzi akanangwa.
Iyo ABM Maitiro ayo Snowflake anoendesa:
chipfuro - kushandisa Everstring uye Bombora, Snowflake haisi kusarudza-ruoko makambani… iri kutsvaga mabhizinesi anoenderana nevatengi vawo uye vakaratidza chinangwa chekutenga.
Svika - kushandisa Terminus, Sigstr, uye LinkedIn, Snowflake iri kuunganidza zvakasarudzika zvemukati zviitiko zvinobata vanotenga vatengi vasati vatomboziva mhinduro yavo. Muchokwadi, Daniel akataura kuti vaive nemutengi mumwe uyo aive 450 inobata pamberi mutengi akambotumira chikumbiro!
Batanidzwa - kushandisa Uberflip, Snowflake ine zvemukati zviitiko izvo zviri anazvo nemaneja wekambani yekutengesa, asi inogadzirwa nechikwata cheABM kuti vape zvakanangwa zvakanyanya kutyaira mutengi murwendo rwevatengi.
Nhamba - kushandisa Engagio, Tableau, uye Kutarisa, Daniel akagadzira nzira yekudyara yekumhanyisa zvinotungamira uye nekupa hungwaru hwekutengesa hunodiwa kune mamaneja ekambani yekutengesa kuti avabatsire pakuvhara chibvumirano.
Mhedzisiro yacho inoyevedza. Dzvanya-kuburikidza nemitengo iyakaderedzwa 149X pa1: 1 ABM kushambadzira. Kwete izvozvo chete, hafu yezvose zvirimo iyo Snowflake inogadzira iri kudyiwa nemasangano anotarisirwa neABM.
Imwe kiyi yakadzokororwa naDanieri kakawanda ndeyekuti hukama pakati pekutengesa nekutengesa hwakakosha kwazvo. Tekinoroji yakabatsira Daniel kukurumidza kuita basa rekutumira pane zvakanangwa zvirimo, asi timu yake ichiri kufanira kunge ichishanda pamikana yakanakisa.
Izvo zvinoda kutengesa kuti upe mhinduro pamwe nekudyisa kungwara kune. Chikwata chaDaniel chinosungirwa kushanda kutyaira mikana yekutengesa yekutengesa, kwete kugadzira imwe yepamusoro MQL (Kushambadzira Yakakodzera Lead) kuverenga.
Wow, iro raingova zuva pre-musangano! Haugoni kumirira mangwana.
Tags: abmaccount based kushambadzirabomboraengagioeverstringLinkedInmutarisiriPersonalizationsigstrSnowflaketafurazvakagadzirirwa zvemukati zviitikotarisaterminusuberflip
Simbisa Kutendeuka Kwako Nokurwisa Aya mashanu Ekuuraya Vanotendeuka